Di Maria oo PSG u gudbiyay qorshe lagu dhabar jabinayo Real Madrid isla markaana kooxda uu ku sii joogi karo Neymar – Gool FM
(Paris) 12 Maarso 2018 Xiddigii hore ee Real Madrid ee Angel Di Maria ayaa diyaariyay qorshe cajiib ah oo kooxdiisu ay ku dhabar jabinayso kooxda tababare Zidane.
Angel Di Maria ayaa u sheegay maamulka kooxdiisa in wadada kaliya ee lagu celin karo Neymar ay tahay in kooxda la keeno daafaca Real Madrid ee Marcelo oo saaxiibo isku dhaw ay yihiin Neymar sida lagu daabacay EuroSport.
Laacibka reer Argentina ayaa isku dayaya sidii uu kooxdiisa uga caawin lahaa saxiixa Marcelo kaas oo Real Madrid ay haatan ku fikirayso inay raadsato badalkiisa maadama uu laba bil kadib noqonayo 30 jir.
Di Maria ayaa aaminsan in sababta Neymar uu ugu ordayo Real Mdarid ay tahay inuu la midoobo Marcelo, sidaas darteed ayuu ku wargaliyay maamulka kooxdiisa in la badalo maanka Neymar isla markaana loo keeno Marcelo.
Mustaqbalka Neymar ee kooxda PSG ayaa mugdi wayn galay kadib dhaawicii soo gaaray laacibka iyo ka haridii kooxda reer France ay ka hartay Champions League.
Suarez oo kula taliyay Neymar inuu iska diido Real Madrid isla markaana uu ku biiro koox ingiriis ah